सांसद ध्रुव कुमार शाहीको पहलमा सल्यान–सुर्खेत सडक सञ्जाल जोडियो – Yug Aahwan Daily
सांसद ध्रुव कुमार शाहीको पहलमा सल्यान–सुर्खेत सडक सञ्जाल जोडियो
युग संवाददाता । १४ भाद्र २०७७, आईतवार १५:३२ मा प्रकाशित
1393 पटक हेरिएको
सल्यान, १४ भदौं ।
सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा नं. १२ को निगालचुला चौरमा सडक सञ्जालले छोएको छ । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. ३ को धारपानी, टिमुरे, हिले हुँदै निगालचुला चौरमा सो सडक जोडिएको छ । सुर्खेत क्षेत्र नं. १ का संघीय संसद धु्रर्व कुमार शाहीको पहल र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको आर्थिक सहयोगमा सो सडक निर्माण भएको हो । करिव एक करोड हाराहारीमा २० किमि सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ ।
उक्त क्षेत्रबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेत जान सजिलो र छोटो हुने जनाएको छ । प्रतिनीधि सभा सदस्य सांसद शाहीले स्थानीयहरुसहित सडकको अनुगमन गर्नुभएको छ । निगालचुला चौरमा पुगेर सडकको स्तरोनतिको लागि पुनः वजेट विनियोजन गर्ने बाचा गर्नुभएको छ । सडक अनुगमनकै लागि संसद शाही आफ्नो क्षेत्र हुदै निगालचुला पुग्नु भएको थियोे । साथै निगालचुलामा वडा अध्यक्ष गोविन्द डाँगी लगायतका स्थानीयले स्वागत गरेका थिए ।
नेकपा जिल्ला कमिटी सुर्खेतका शान्तबहादुर बुढा, नरबहादुर डाँगी, जिल्ला कमिटी सदस्य सल्यानका दिपक यरि लगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियोे । सांसद शाहीलाई निगाचुला चौरवासीले सडक स्तरोन्नती गरिदिन माग गरेका छन् । सल्यानको दुर्गम बस्ती निगालचुला र सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिकाको वडा नं. ३ हिले, टिमुरे र धारापानी लगायतका विकट बस्तीहरुमा शाहीको विशेष पहलमा उक्त बस्तीहरु सडक सञ्जालले जोडिएका छन् ।